Allgedo.com » Wasiirka Maaliyada Soomaaliya oo ka hadlay hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagaha doolarka
Wasiirka Maaliyada Soomaaliya oo ka hadlay hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagaha doolarka
Wasiirka Maaliyada iyo qorsheynta Soomaaliya Maxamuud Xasan Suleymaan ayaa markii u horeyay ka hadlay hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagaha doolarka, kaasoo maalmihii u dambeeyay saameyn ku yeeshay habsami u socodka ganacsiga guud ee dalka.
Shir jaraa’id oo uu Wasiirka maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu sheegay inay dowladda ka xun tahay saameynta ay shacabka ku yeelatay hoos u dhaca dowladda, isagoo tilmaamay inay wax ka qaan doonaan.
“Waa la soconaa is bedelka ku dhacay sarifka lacaga dolarka waana ka xunahay, hadii culeys ka soo gaaray shacabka, arrintaas waxaa sabbay lacagtii shilinga Soomaaliga oo dalka ku yaraatay, ama duugowday iyo lacag badan oo shiling Soomaaliga oo ku gubatay Boosaaso iyo doolarka oo xoogeystay arrimahaas ayaa sababay inuu hoos u dhaco sarifka doolarka”ayuu yiri Wasiirka Maaliyada Maxamuud Xasan Suleymaan.
Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in dhowaan ay daraasad ku sameynayaan dhinaca dhaqaalaha, isla markaana ay dalka ku fasaxayaan lacagaha shilinga si looga baaqsado sicir barar iyo is bedel ku yimaada doolarka sida uu yiri.
“Waxaa sameyn doonaa daraasad ku aadan dhaqaale sida ugu fiican ee loo wajihi karo, waxaa la kaashaneynaa dowladaha saaxibada nala ah, inaan wadanka soo gelino lacago oo fasaxno, taasna waxaa u mareynaa hab daraasadeed”ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Maalmihii u dambeeyay waxaa jahwareer uu ka taagnaa qiimaha sarifka doolarka oo maalinba maalinta ka dambeysa uu hoos u dhacayay, waxaana uu wal wal badan uu soo wajahay qoysaska biilasha looga soo diro dibada, iyadoo wali maciishada ay sare u kacsan tahay, doolarkiina uu jaban yahay.